About Us - Huajiang Paper Plastika Package Co., Ltd.
Xiongxian Huajiang Paper Plastika Package Co., Ltd . mirotsaka amin'ny karazana fonosana hentitra loatra. Ny lohany biraon'ny Faritany Xiongan New Area ny Hebei Province aiza ny toerana feno fanantenana indrindra ao Shina nandritra ny arivo taona, dia ny vaovao ao Shina mifantoka-dalam-pandrosoana. Efa nahazo ny mety indrindra ny fitaterana, ny orinasa no afa-tsy 47 kilaometatra avy any Beijing, ary 110 mils avy any amin'ny seranan-tsambon'i Xingang.
Huajiang naorina tamin'ny 1991 ary lasa tsikelikely miankina amin'ny fahazotoana sy ny fanaovana ny marina. Ny orinasa mpamokatra entana pototry ny 8000 toradroa metatra Niorina tamin'ny 2002 miaraka amin'ny nafarana avo-lenta ny milina, ohatra, 9-loko gravure fanontam-pirinty milina, maina laminating milina, mamelombelona milina, haingam-pandeha slitter milina sy ny extruders izay mitambatra ho mandeha ho azy pamokarana. Ankoatra izany, dia nohamafisin'ny ISO9001: 2008 tamin'izay taona.
Tamin'ny 2009, dia niakatra tamin'ny orinasa filozofia "fanavaozana sy ny fitandremana ny amin'ny fotoana dia miankina amin'ny teknolojia sy ny foto-kevitra", ary nanomboka ny hiara-miasa amin'ny Fanjakana Key Laboratory for New Material mba hanana vaovao teknika, vaovao ara-nofo sy ny vaovao raikipohy mba hihaona amin'ny fepetra manokana ny mpanjifa.
Tamin'ny 2012 , dia nisy fanadiovana atrikasa ny 3000 metatra toradroa nisiany mponina. Dehibe ny azo antoka indrindra izahay solvent-maimaim-poana avy any Italia laminated milina, sy ny fanontam-pirinty haingam-pandeha milina, milina mandeha ho azy manova ny hijoro kitapo Zip ambony. Tamin'ny taona io ihany, dia nahazo ny jiro modely Patents, ary namonjy mividy vola ho an'ny governemanta, fara fahakeliny, RMB 1 arivo tapitrisa isan-taona.
Tamin'ny 2015, ny sampana orinasa ny 27000 metatra toradroa Niorina tamin'ny Tianjin.
Misy QC foibe eo amin'ny orinasa maro nohafarana fitaovana, ohatra, tensile fitiliana milina, hafanana-tombo-kase milina fanaovana fitiliana, entona chromatograph, friction metatra sy ny sisa.
Isika hanatanteraka ny adidy ara-tsosialy ny orinasa koa, ary vola bebe kokoa ho any amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampivelarana bebe kokoa amin'ny fonosana maitso tsy fandotoana fitaovana, toy ny benzol-malalaka ranomainty, solvent-malalaka lakaoly, sy ny sisa.
Manara-penitra fenitra, tsara asa fanompoana sy mandanjalanja vidin'ny tao anatin'ny 27 taona, Huajiang Paper Plastika Package efa niantehitra tamin'ny isan-karazany ary tohanan'ny mpanjifa sy ny mpanjifa na ao an-toerana sy tany ivelany.
Manantena izahay hitsena namana vaovao avy amin'ny manerana izao tontolo izao mba hampitombo sy miara-handray soa!